Nhasi Sony Interactive Varaidzo yakatumira yakati kurei "Yekupedzisira FAQ”Nezve PS5, iyo yakarongerwa kurova masherufu munguva pfupi.
Iyo FAQ zvirokwazvo yakanaka kwazvo "yekupedzisira," kusanganisira zvinhu zvakawanda zvaungangoda kuziva usati wasvetukira pane shanduro yaSony yechizvarwa chinotevera.
Unogona kuiverenga zvizere pasi apa:
Ndeupi musiyano uripo pakati pePS5 koni uye yePS5 Dhijitari Yekutsikisa?
Musiyano chete pakati pePS5 koni uye PS5 Dhijitari Yekutsikisa Dhidhiyo ndiko kuiswa kweiyo Ultra HD Blu-ray disc drive muPS5 koni. Iyo PS5 Dhijitari Edhisheni koni haina dhisiki dhisiki.
Iyo PS5 koni inoratidzira iyo Ultra HD Blu-ray disc drive iyo inokutendera iwe kutamba PS5 Blu-ray disc mitambo uye PS4 Blu-ray disc mitambo, pamwe nekutamba vhidhiyo kubva ku4K Ultra HD Blu-ray Discs, standard Blu-ray discs, uye maDVD.
Iyo PS5 Dhijitari Edhisheni koni haina Ultra HD Blu-ray disc drive. PS5 Dhijitari Edhisheni koni varidzi vachakwanisa kutenga PS5 uye PS4 mitambo kubva ku PlayStation Store kana kuwana mitambo kuburikidza ne PlayStation Plus uye PlayStation Zvino (kunyoreswa kwakabhadharwa kunyoreswa kunodiwa kune yega, kunotengeswa zvakasiyana).
Uye inopfuura 99% yemitambo 4,000+ yePS4 inogona kutambidzwa chero paPS5 koni kana iyo PS5 Dhijitari Yekutsikisa, kunyangwe iine PS5 Dhijitari Yekutsikisa mitambo iyi inoda kutorwa kubva kuStartStation Store nepo iyo PS5 modhi ine Blu-ray disc drive ichatsigirawo PS4 Blu-ray discs.
Ongorora: Blu-ray discs haigone kushandiswa nePS5 Dhijitari Edhisheni koni. Kana iwe uine yako PS4 Blu-ray Discs, haugone kuishandisa nePS5 Digital Edition koni.
Pane chero misiyano yekuita pakati pePS5 koni uye yePS5 Dhijitari Yekutsikisa?
Kwete. Kuita kwevanonyaradza kwakafanana, kunze kwekuvapo kwedhiraidhi.
Ndeapi matanho epanyama eiyo PS5 koni uye yePS5 Dhijitari Yekutsikisa? Izvo zvinorema zvakadii?
Iyo PS5 koni inenge inenge 390mm x 104mm x 260mm (upamhi x kukwirira x kudzika), kusasanganisa iyo Base, uye inorema mukati ingangoita 4.5kg.
Iyo PS5 Dhijitari Edhisheni koni ingangoita 390mm x 92mm x 260mm (upamhi x kukwirira x kudzika), inorema mukati kutenderera 3.9kg.
Ndinogona here kushandisa ese maviri maPS5 modhi modhi mune yakatwasuka kana yakatwasuka yakatarisa?
Ehe, ese ari maPS5 mamodheru anosanganisira Base iyo inobvumidza vashandisi kugadzirisa iyo console yekumira kana yakatwasuka kuiswa. Tarisa yedu PS5 teardown vhidhiyo kuona kuti zvinoshanda sei.
Ko PS5 ichave ichiwanikwa mune mamwe marangi zvirongwa?
Hakuzovi nemimwe mivara kana magadzirirwo anowanikwa chero eiyo maPS5 mamodheru pakuvhurwa.
Ndeipi yekuisa / yekubuditsa madoko uye ekubatanidza maficha anotsigirwa nePS5?
Pamberi peKunyaradza USB Type-C® chiteshi (Super-Yekumhanyisa USB 10Gbps)
USB Type-A chiteshi (Hi-Yekumhanyisa USB) - Unganidza yako DualSense waya isina waya kune chiteshi ichi.
Kudzoka kweKunyaradza USB Type-A chiteshi (Super-Yekumhanyisa USB 10Gbps) x2 - Shandisa aya madoko kubatanidza USB drive yekuwedzera kuchengetedzwa. Iwe unogona zvakare kubatanidza yako HD Kamera pano.
Networking Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) Wifi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / demo
Ko PS5 inoshandisa chekunze 'chidhinha chemagetsi'?
Kwete, PS5 yakagadzirirwa nesimba remukati.
Chii chinosanganisirwa mubhokisi rePS5 pakuvhurwa?
Chero ipi modhi yaunosarudza, iwe unowana:
Iyo PS5 koni kana PS5 Dhijitari Edhisheni koni
Imwe DualSense isina waya controller
USB Type-C kune Type A kuchaja tambo kune iyo DualSense isina waya controller
HDMI tambo (inoenderana ne Ultra Yakakwira Speed ​​inotsanangurwa neHDMI v2.1)
Tambo yemagetsi AC
Base iyo inokutendera iwe kutungamira iyo koni kungave yakatwasuka kana yakatwasuka
Kurumidza Kutanga uye Yekuchengetedza gwara.
Pamusoro pezvo, ese ari maviri maPS5 mhando anouya nemahara mutambo pre-yakaiswa. Astro's Playroom imba-nyowani platformer iyo inobvumidza vatambi vePS5 kuti vaongorore nyika ina, imwe neimwe ichiratidzira mutambo mutsva unoshandisa iwo matsva uye akasiyana maitiro eDualSense waya isina waya.
Iyo Ultra Yakakwira-Yekukurumidza SSD
Chii chakakosha nezvePS5's SSD?
PS5's ultra-high-speed SSD uye yakasanganiswa tsika I / O system yakagadziriswa nechinangwa chekubvisa zvipingaidzo zvekutamba - kunyanya kurodha masikirini. Vagadziri vanokwanisa kuendesa midziyo mumitambo yePS5 pamwero unoshamisa kwazvo, saka PS5 zviitiko zvekutamba zvinogona kunge zvisina musono uye zvine simba, nekufamba-nekukurumidza nekukurumidza nekukurumidza kuburikidza nemitambo mikuru yenyika. Iyi yekumhanyisa yekumhanyisa ichaita kuti vagadziri vemitambo vagadzire makuru, akapfuma nyika dzese pasina zvimiro zvetsika, senge nguva dzekutakura, uye zvakare inobvumidza vatambi kushandisa nguva yakawanda yekutamba pane kumirira.
Ndeupi musiyano uripo pakati pePS5's yekumusoro-soro kumhanya SSD uye mamwe maSSD?
Iyo 5.5GB / s (mbishi) verenga bandwidth yePS5's Ultra-yakakwira kumhanya SSD iri pamucheto wekucheka nekuda kwekumberi kwayo, yakasarudzika dhizaini uye yakasanganiswa I / O, inosanganisira yakasarudzika decompressor. Takazvigadzira nechinangwa chaicho chekudzora nguva dzekuremerwa uye nekukudziridza kugona kwemusimudziri wekuwana dhata yemutambo nekumhanya-mhanya.
Isu tinotenda inomiririra kusvetuka kwechokwadi mukuwana dhata, uye ichaburitsa vavaki vemitambo kuti vagadzire yakakura, yakapfuma, uye yakawanda isina musono zviitiko zvekutamba kupfuura nakare kose.
Ko PS5 inovandudza kugona kwangu kurodha pasi uye kuchengeta mitambo?
Zvakafanana nePS4, PS5 mitambo inogona kupa chinodaidzwa chinonzi "Yakasarudzika Gadza" iyo inobvumidza vatambi kuti vasarudze chikamu chemutambo kuti vatange kutanga. Izvi zvinogona kubvumidza mutambi kukoshesa kuwana kune imwe nzira kana chimiro. Muenzaniso unogona kutanga kuisa kuiswa kweyechete-mutambi kana wevazhinji chikamu chemutambo.
Mumitambo inotsigirwa yePS5, vatambi vanogona zvakare kusarudza kubvisa chaiwo mamodhi kana zvemukati zvavasingachade kuitira kusunungura nzvimbo yekuchengetera. Vagadziri vanozopedzisira vaona danho rerutsigiro rwunopihwa izvi maficha, asi icho chinangwa ndechekuwedzera kuchengetedza kuchinjika.
Kudhawunirodha nekushandisa Game software inogadziridza paPS5 inofanirwa kushanda nekukurumidza kupfuura pane iyo PS4 koni mune zvese, sezvo saizi yedata remisheni uye zvigamba zvichitarisirwa zvakanyanya.
Pamusoro pezvo, chimwe chinhu pane yakagadziridzwa PlayStation App yemafoni nhare inobvumidza vatambi kudzora kwavo PS5 kuchengetedza kana vakapera nzvimbo pavanomira mumutsetse kurodha kukoni yavo kuburikidza neapp.
Ndinogona kuchengeta kana kutamba mitambo yePS5 kubva kuUSB drive?
Kwete, vatambi havagone kuendesa mitambo yePS5 kune USB drive. Mitambo yePS5 inofanirwa kuchengetwa pane yemukati yekodhi-yakakwira kumhanya SSD yemutambo. Kutsvaga kwekubvumidza vatambi kuchengeta (asi kwete kutamba) PS5 mitambo pane USB drive mune ramangwana kugadzirisa kuri kuitika.
Unogona, zvisinei, kuchengeta uye kutamba mitambo yePS4 kubva kune inoenderana USB drive yakabatana nePS5. Kuti uwane rumwe ruzivo, ramba uchiverenga.
Ndinogona here kuwedzera PS5's ultra-high speed SSD storage?
PS5 ine chiteshi chekuwedzera icho, mune ramangwana, chinogonesa vatambi kuwedzera M.2 SSD yekuchengetedza kuti ishandiswe pakuisa nekutamba mitambo yePS5.
Iyi M.2 SSD yekuchengetedza yekuvandudza mashandiro ichauya kuPS5 mushure mekumisikidzwa sechimwe chikamu chegadziriro software yekuvandudza. Tichagovana rumwe ruzivo mune ramangwana, kusanganisira kutenderera rudzii rweMXXMUMX SSD yekuchengetedza drive ichaenderana nePS2.
Pazuva rekutanga, iwe unozokwanisa kubatanidza inoenderana USB drive uye uishandise kuchengeta nekutamba mitambo yako yePS4. Iwe unozogona kutamba mitambo yePS4 ivo vachiramba vakachengetwa pane chokunze mudziyo. Mitambo yePS5 inoda kugara paPS5 yemukati SSD pamberi pekutamba.
Chii chinonzi M.2 SSD drive?
M.2 SSD inotyaira inomhanya-mhanya SSD svikiro iyo iwe yaunogona kushandisa kukwidziridza inokwanisa yekuchengetedza mumidziyo yakatsigirwa. Ose ari maviri maPS5 mamodheru anotsigira M.2 SSD yekuchengetera kuwedzera zvichitevera ramangwana sisitimu software yekuvandudza iri kuuya mushure mekutanga.
Ndichada here kushandisa yakatarwa mhando kana kumhanyisa kweM.2 SSD yekutyaira nePS5 yangu?
Ehe, padiki padanho rekuita padanho reMXXUMUM SSD dhiraivha inodikanwa, uye isu tichagovana zvimwe zvakawanda mune ramangwana.
Ini ndinofanira kutenga M.2 SSD drive yePS5 yangu pakuvhurwa?
Kwete izvozvi, tinokurudzira kuti ubatirire pakutenga chero M.2 SSD inotyairwa kuti ishandiswe nePS5. Isu tichagovana rumwe ruzivo nezve zvakakurudzirwa madhiraivha mune ramangwana. M.2 SSD yekuchengetedza mashandiro achauya kuPS5 mushure mekumisikidzwa neinouya system software yekuvandudza.
Chii chinonzi Dutu 3D AudioTech?
Dutu 3D AudioTech ndeyePS5's tsika injini ye3D Audio. Ichapa odhiyo yemhando yepamusoro uye inobvumidza mitambo kuti ipe yakadzama pfungwa yekunyudza kuburikidza neyakajairwa 3D Audio kuitiswa ine PS5-inoenderana headset.
PS5's 3D Audio inobatsira sei Gameplay?
Mitambo ichapinda muPS5 yepamusoro 3D Audio kugona nenzira dzakasiyana zvichienderana nezvinangwa zvechikwata chekuvandudza. Pakati pezvimwe zvinhu zvemberi zvekuteerera, PS5's 3D Audio inotsigira kwazvo chaiyo odhiyo yekumisikidza.
Mienzaniso inogona kunge iri yekunzwa museve zip yapfuura musoro wemutambi, kana kunzwa tsoka tsoka mune imwe kamuri uye kuona nzvimbo yemuvengi.
Ko wega wega PS5 mutambo uchabatsirika kubva ku3D Audio?
Hongu. Kunyangwe iri nyore chiteshi-yakavakirwa odhiyo ichave nekuwedzera kukura nekutenda kune PS5's Tempest 3D AudioTech. Iyo chaiyo 3D Audio mhedzisiro inogona kusiyanisa zita nemusoro, uye kugadziridza kwekuvandudza kunopa chakanakisa chiitiko
Zvakawanda, PS5's odhiyo yekugadzirisa kugona kwakanyanya kumberi kupfuura maPS4, saka vanogadzira mitambo yePS5 vanozove nematurusi matsva ane simba ekugadzira huru-yemutambo odhiyo.
Ndedzipi mhando dzemusoro wemusoro dzandinogona kushandisa kunakidzwa ne3D Audio?
Iyo PULSE 3D isina waya yemusoro yakagadzirirwa kuti itore mukana wakazara wePS5's 3D Audio kugona. Iine dhizaini yakanatswa, maikorofoni maviri-ekudzima ruzha, uye kuwanda kwekudzora-nyore kudzora, iyo PULSE 3D isina waya yemusoro inopa chiitiko chisina musono.
Vatambi vanogona zvakare kuona 3D Audio paPS5 ine PS5-inoenderana mahedhifoni aungave uchitova nawo, kungave kuburikidza neconsoleji yeUSC kubatanidza, kana nekuvhara plugog yeanalogog muDualSense wireless controller's 3.5mm headset jack.
Iko 3D Audio inowanikwa kuburikidza nevatauri veTV?
Mutauri weTV chaiyo yakatenderedza ruzha haizovepo pazuva rekuvhura rePS5 asi rakarongerwa remangwana ramangwana.
Ini ndinowana sei yakanakisa 3D Audio ruzivo pane PS5?
Kushandisa inoenderana nePS5-inoenderana stereo headset inopa yakanakisa 3D Audio ruzivo nekuda kwekugona kuendesa odhiyo kunzeve imwe neimwe zvakasiyana. Uye zvakare, sezvo nzeve dzemunhu wese dzakati siyanei zvishoma, PS5 inopa seti yemaprofayile evashandisi akavakirwa ayo vatambi vanogona kusarudza kubva kwavari kuti vawane ruzha rwakanyanya kwavari.
GPU, CPU uye RAM
Ndeapi maficha eiyo AMD CPU neGPU?
8 Makore / 16 Mashinda
Variable frequency, inosvika ku3.5 GHz
GPU AMD Radeon TM RDNA 2-yakavakirwa mifananidzo injini
Ray Kutsvaga Kuwedzera
Inoshanduka frequency, inosvika ku2.23 GHz (10.3 TFLOPS)
Chii chaizvo chinonzi ray kuronda, uye zvichaita sei kuti mitambo yePS5 iratidzike zvirinani?
Hardware-basedray yekutsvaga kumhanyisa inosanganisirwa muPS5's giraidhi yekugadzirisa yuniti (GPU), uye vagadziri vane nzira dzakawanda dzekupinza mune aya kugona.
Muchidimbu, ray yekutsvagisa mumifananidzo inoteedzera nzira iyo chiedza chinopindirana nayo nezvinhu uye nzvimbo, nechinangwa chekugadzira zvimwe mu- mutambo ruzivo rwekuona. Vagadziri vemitambo vePS5 vanogona kutora mukana wekutevera ray kuita kuti migumisiro yemvura, girazi, kuburitsa mwenje, mimvuri, uye huso zvioneke sezvazviri kana kurova, zvinoenderana nezvinangwa zvemutambo wavo.
Hupamhi hwebhenefiti, senge akabatana mwenje mamodheru kana zvimwe zvemberi mhedzisiro, zvakare zvinokwanisika zvichienderana nezvinogadzirirwa zvinangwa zvezita ravo rePS5.
Ndeapi mabhatani anoratidzwa paPS5?
Iyo PS5 koni ine Simba bhatani uye Bvisa bhatani reBlu-ray Discs. Iyo PS5 Dhijitari Edhisheni koni ine chete Simba bhatani.
PS5 ichaita ruzha rwakadii pandiri kutamba mitambo?
Chinangwa chedu ndechekuti PS5 inyarare kupfuura PS4. Izvi zvinokonzerwa nekushandurwa kwesimba rekuendesa uye kutonhora masisitimu, pamwe neyakajairika basa reinjiniya inosanganisira yakasarudzika heatsink uye yemvura simbi-based thermal interface zvinhu.
Unogona kutarisa zvakanyanya kutonhodza kwePS5 mune yedu yadarika teardown vhidhiyo.
Iyo PS5 inoratidzira nzira yekuzorora? Ndeapi mabasa anokwanisika uchiri munzira yekuzorora?
Hongu. Kana iyo system ikaiswa mune yekuzorora mode, iyo skrini ichadzima, iyo chinongedzo chinongedzo chichienda kune orenji, uye PS5 ichapinda mune yakaderera-simba nyika. Iwe unogona kuseta iyo system kuti iite zviito senge kurodha pasi mafaera kana kuchaja iyo DualSense isina waya mutyairi kubva kuchiteshi che USB ichiri munzira yekuzorora.
Zororo nzira yePS5 ichave inogoneswa nekutadza mumisika yese.
Ndedzipi tsika dzakanakisa kana ndichigadzira yangu PS5 kumba?
Kuti uchengetedze kufefetera kwakanaka, tevera aya marongero pazasi:
Isa koni yacho ingangoita gumi cm (10 mukati) kure nemadziro edenga.
Usaise pane kapeti kana rugi ine tambo refu.
Usaise munzvimbo yakatetepa kana yakamanikana.
Usatendere guruva kuti riwedzere pamusoro pemhepo. Shandisa chishandiso chekuchenesa senge chishambisi chekubvisa kubvisa guruva.
Ko PS5 inoda 4K TV? Ndezvipi zvisarudzo zvinotsigirwa?
Kwete, PS5 haidi 4K TV. Tsigiro dzakatsigirwa ndeye 720p, 1080i, 1080p, uye 2160p. PS5 inogona kuburitsa zvisarudzo zvinosvika ku2160p (4K UHD) kana yakabatana nechiratidziro che4K.
PS5 inoenderana nezviratidzwa zve8K pakuvhurwa, uye mushure mekuvandudzwa kwesoftware software inozokwanisa kuburitsa zvisarudzo kusvika ku8K kana zvirimo zviripo, ne software inotsigirwa.
PS5 inotsigira HDR here?
Ehe, PS5 inotsigira iyo HDR10 kududzirwa.
Ini ndinogona kubatanidza yangu PS5 kune yangu yakatenderedza ruzha system kana ruzha bhaa?
Ehe, vatambi vanogona kushandisa PS5's HDMI OUT chiteshi kuti ubatanidze kuTV yako kana ruzha system.
Ndeapi maodhiyo ekuburitsa mafomati anotsigirwa nePS5?
PS5 inotsigira anotevera mafomati odhiyo:
Dolby Dhijitari (max 5.1ch)
Dolby Dhijitari Kuwedzera (max 7.1ch)
DTS-HD Yakakwira Resolution Audio (max 7.1ch)
Ndeupi rudzi rwe HDMI tambo yandinofanira kushandisa kubatanidza iyo PS5 kuTV kana mugamuchiri?
Iyo inosanganisirwa HDMI tambo inokurudzirwa, asi kazhinji, shandisa iyo Ultra High Speed ​​HDMI Cable inotsigira HDMI 2.1.
Will PS5 inotsigira 4K pa120Hz modes?
Ehe, PS5 inotsigira iyo HDMI 2.1 kutaurwa. HDMI 2.1 inotsigira 4K 120Hz, asi HDMI 2.1-inoenderana 4K maTV haasati apinda zvizere mumusika.
Iyo DualSense Wireless Mutongi
Ndeupi mutsauko uripo pakati peDualSense Wireless controller uye iyo DualShock 4 Wireless mutungamiriri?
Iyo DualSense isina waya inodzora inosimudza iyo nzira iyo vatambi vanoita nemitambo. Ndokutenda kune akati wandei anonyudza anotevera-chizvarwa maficha, anosanganisira haptic mhinduro tekinoroji uye zvinogadziriswa zvinokonzeresa.
Dzese mhinduro dzehaptic uye zvinokonzeresa zvakagadzirirwa kuburitsa manzwiro akasimba ekunyudza anodzamisa mutambi kunyudza uye kuwedzera kusangana kwemitambo.
Ndeapi masimba epanyama uye huremu hweiyo DualSense isina waya controller?
Iyo DualSense isina waya inodzora inoyera anosvika 160mm x 66mm x 106mm (upamhi x kukwirira x kudzika), kusanganisa iyo huru fungidziro. Inorema angangoita 280g.
DualSense wireless controller's haptic feedback tekinoroji inoshanda sei?
Inotevera-chizvarwa haptic mhinduro inotsiva echinyakare "rumble" maficha nemaviri actuator, ichipa yakanyanya kunyudza suite yemasimba epanyama manzwa. Isu tinotarisira kuti vagadziri vemitambo vanowana nzira dzakawanda dzinonakidza uye dzinoshanda dzekubaya mukati meDualSense isina waya controller controller yakasarudzika haptic kugona, kubva mukudzamisa mutambi kunyudza kusvika mukutaurirana dzakasiyana siyana mutambo wemitambo, nezvimwe zvakawanda.
Vatambi vanozokwanisa kudzikamisa maitiro kana kudzima ficha kana vachida.
Iko haptic mhinduro yakasimba yeiyo DualSense isina waya controller inoenzaniswa neiyo "rumble" ficha kubva kuDualShock 4 wireless controller?
Panyaya yechinyakare "rumble" tekinoroji, maviri madiki mota anotsvedza kuitira kuti agadzire kudedera kana kuzunza kunzwa kunogona kuwedzera kunyudza.
Iyo DualSense isina waya inodzora inotevera-chizvarwa haptic tekinoroji inoshandisa maviri maactuator panzvimbo pemota, uye mhedzisiro yacho inokurumidza, yakanyatsojeka, uye yakatonyanya kurerekera. Iyi mhedzisiro mhedzisiro inogona kuburitsa yakatambanuka yakakura nhanho yemanzwiro epanyama, kubva pakunyoro kupomba kwakavakirwa mune chimwe chikamu cheanodzora, kune mamwe akasimba mhedzisiro mhedzisiro.
Kana uchitamba mutambo wePS4 paPS5, iyo DualSense isina waya controller haptic mhedzisiro inoteedzera iyo "rumble" mhedzisiro yeDualShock 4 isina waya controller. Vatambi vanofarira kusangana nePS4 mutambo wepakutanga "rumble" mhedzisiro vanogona kushandisa DualShock 4 waya isina waya kutamba mitambo yePS4 paPS5 yavo. Kune mitambo inoda kumberi-yakatarisana nebarbar, iyo DualShock 4 isina waya controller inodiwa.
Kune akanakisa ePS VR ruzivo paPS5 tinokurudzira kushandisa DualShock 4 waya isina waya. Mitambo yakasarudzwa ingangoda vatambi vePlayStation Move yekufamba kana kuenderana neiyo PlayStation VR Chinangwa controller.
Vatambi vachazoda kushandisa DualSense isina waya kutonga kuti vatambe mitambo yePS5.
Ndeapi ari mu-mutambo mienzaniso yeiyo haptic mhinduro inoshandiswa neDualSense waya isina waya?
Enzaniso dzinosanganisira kunzwa kwesimbi ichirova simbi muMweya yeMweya kana kunzwa manyorerwo epasi Astro inomhanya muAstro's Playroom.
Zvinogadzirisa zvinoshanda zvinoshanda sei?
Iwo matsva ekugadzirisa anokonzeresa - akaisirwa mumabhatani eL2 uye R2 - anogona kugadzira zvine simba, chaizvo-nguva zvinokonzeresa mhedzisiro inotevedzera zviito zvako zvemumutambo. Semuenzaniso, mutambi anogona kudhonza tambo yeuta mumutambo uye nekunzwa kuramba sezvo tambo ichikura taut. Kana ivo vaigona kudzvanya bhureki remabhureki mumutambo wekutyaira uye vanonzwa kushomeka sezvavanomira vakatenderedza rakakombama rakakombama.
Vagadziri vanogona kuzvimiririra vachiramba kushora kweimwe neimwe inokonzeresa, saka tiri kutarisira kuona kumwe kwekugadzira kwakanaka kana PS5 yatanga!
Vatambi vanozokwanisa kudzikamisa kana kudzima zvinokonzeresa kana vachida. Kana mutambo usingashandise chimiro, mabhatani eL2 neR2 anoita zvakafanana kune mabhatani ari paDualShock 4 waya isina waya.
Iyo DualSense isina waya inodzora inosanganisira yakavakirwa-mukati mutauri?
Kutenda kune yakakwira sampling frequency uye acoustic kugadzirisa, iyo DualSense isina waya controller's yakasanganiswa mutauri inogadzira yakajeka mitsindo kupfuura iyo DualShock 4 isina waya controller.
Kwemakore, vagadziri vemitambo vakashandisa DualShock 4 wireless controller mutauri kusimudzira kunyudza munzira dzekugadzira, uye isu tinofara kuvaona vachienderera netsika iyoyo neDualSense isina waya controller.
Iyo DualSense isina waya inodzora inosanganisira yakavakirwa-mukati maikorofoni?
Ehe, iyo DualSense isina waya inodzora maikorofoni yakarongedzwa uye yakavakirwa-mukati kukanzura kudzima kuchagonesa vatambi kuti vakurumidze kutaurirana neshamwari vasina kumisikidza headset - yakanakira kusvetukira mukukurukurirana nekukurumidza neshamwari. Asi kana iwe uri kuronga kutaura kwenguva yakareba, ungangoda kuve ne headset inobatsira.
Bhatani mbeveve kumberi kweiyo DualSense isina waya inodzora inobvumidza vashandisi kuchinjisa mic uye kuvhara. Bhatani pfupi bhatani rinonyaradza kana kusimbisa mutyairi mic, pamwe neiyo mic iri pawired headset kana USB headset, nepo muchina wakareba uchimisa mic yekuisa pamwe neese PS5 odhiyo kuburitsa kubva kune yako yakabatana TV, maspika, kana mahedhifoni. .
Iyo DualSense isina waya controller ine headset jack?
Ehe, iyo DualSense isina waya controller's integrated headset jack inobvumidza vatambi kuti vavharise mumusoro, mahedhifoni, kana imwe nhare inoenderana inoenderana, yakafanana nePS4. Vatambi vanogona zvakare kubatanidza wired headset uye kutaura neshamwari mune dzakawanda mitambo.
Ko PS5 kana iyo DualSense isina waya controller inotsigira izwi kududzira?
Ehe, vatambi vanozogona kushandisa ekuraira maficha kunyora mameseji kana kuisa mitsara yekutsvaga, vachishandisa iyo DualSense isina waya yekudzora mic, kana maikisikopu. Pakutangisa, mitauro yakatsigirwa inosanganisira chiJapanese, US Chirungu, UK Chirungu, Spanish, Latin American Spanish, French, Canada French, Italian, uye German.
Iyo DualSense isina waya inodzora inoratidzira mafambiro ekufamba?
Ehe, mutungamiriri anoratidzira yakabatanidzwa nhanhatu-axis yekufamba kwekunzwa system (matatu-axis gyroscope uye matatu-axis accelerometer).
Iyo yekubata pad pane iyo DualSense isina waya controller ine chero nyowani kugona?
Iyo yekubata pad iko ikozvino yakati kurei uye zviri nyore kune vatambi kusvika. Iyo yekubata pad inoratidzira ine yechiedza bhaa iyo inogona kushandiswa kuratidza chinzvimbo chinodzora uye inogona kuratidza akasiyana mavara kutaura mamiriro emutambo, zvakafanana neizvo iwe zvaungave wakasangana nazvo neDualShock 4 isina waya controller.
Iyo DualSense isina waya inodzora ine bhatani re 'Kugovana'?
Ehe, iro Gadzira bhatani rakagadzirirwa kuvaka pamusoro pekubudirira kweindasitiri-yedu yekutanga Govana bhatani. Nebhokisi reKugadzira, tave zvakare kupa simba vatambi kuti vagadzire zvemitambo yemitambo yekugovana nenyika, kana kungozvinakidza.
Tarisa yedu PS5 UX vhidhiyo kudzidza zvakawanda nezve mashandiro eBhatani bhatani.
Iyo DualSense isina waya inodzora ine mwenje bhaa?
Ehe, iyo DualSense isina waya controller inoratidzira mutambi-akatarisana nemwenje mabara. Pamitambo yePS4 inoda kumberi-yakatarisa kubara uye inogona kutamba paPS5, vatambi vanofanirwa kushandisa DualShock 4 isina waya controller ye Gameplay. Kune akanakisa ePS VR ruzivo paPS5 tinokurudzira kushandisa DualShock 4 waya isina waya. Mitambo yakasarudzwa ingangoda vatambi veClassStation Move yekufamba kana kuenderana neiyo PlayStation VR Chinangwa controller.
Iwo mabharani emwenje pane iyo DualSense isina waya inodzora akarara kurudyi uye kuruboshwe kwepasiti yekubata, uye inogona kuratidza mavara akasiyana kuti ataure mamiriro emutambo, zvakafanana nezvaungave wakasangana nazvo neDualShock 4 waya isina waya.
Pazasi pekubata padhi, chinongedzo chemutambi chinotaurirana mutambi wauri - anobatsira kana uchitamba munharaunda nevamwe vanhu.
Ko iyo DualSense isina waya controller inovandudza yekuisa latency ichienzaniswa neye DualShock 4 controller?
Input latency yakagadziridzwa pane iyo DualSense isina waya controller kana ichienzaniswa neDualShock 4 isina waya controller.
DualSense inodzora inotsigira chero mikana yekuwanika?
Ehe, vatambi vePS5 vanozogona kudzikamisa kana kudzima simba rehaptic mhinduro uye zvinogadzirisa zvinokonzeresa. Vatambi vanogona zvakare kudzorera mabhatani pane mutongi. Uye iyo DualSense isina waya inodzora maikorofoni inobvumidza izwi rekutaurisa maficha, zvichiita kuti zvive nyore kune vatambi kutsvaga zvemukati nezwi ravo.
Kuti udzidze zvakawanda nezve zvimwe zvinowanika zviripo zvePS5, verenga pazasi.
Ini ndinobhadharisa sei iyo DualSense isina waya controller?
Iyo DualSense isina waya controller inogona kubhadhariswa munzira mbiri huru. Imwe iri kuburikidza ne USB Type-C® chiteshi, icho vatambi vanogona kubatanidza kuPS5 (kana chishandiso chinowirirana chinoroja) vachishandisa yakasanganisira USB tambo.
Pamusoro pezvo, iyo DualSense Yekuchaja Chiteshi (inotengeswa zvakasiyana) inogona kubhadharisa kusvika kune vaviri vatongi panguva imwe chete.
Inguva yakareba sei mutungamiriri weDualSense anozogara pamutero wakazara? Zvinotora nguva yakareba sei kuti riite recharge?
Pasi pemamiriro mazhinji, hupenyu hwebhatiri hunotarisirwa kunge hwakafanana neiyo DualShock 4 waya isina waya. Kudzosera nguva kana yakabatana nePS5 kana iyo DualSense Yekuchaja Chiteshi inofungidzirwa kungangoita maawa matatu.
Vangani vatungamiriri veDualSense vanogona kubatana nePS5 chero nguva imwe chete?
Kusvikira kumane maneja eDualSense maneja anogona kusunganidzwa kune imwechete PS5 panguva. Kana uchitamba nevatambi vakawanda munharaunda, iyo DualSense wireless controller's player chiratidzo (chiri kungori pasi pepati yekubata) inozotaura kuti ndiwe mutambi upi.
Ini ndinogona kubatanidza iyo DualSense isina waya controller kune yangu PS5 kuburikidza ne USB tambo, uye kuiridza iyo mune "wired" mode?
Ehe, iyo DualSense controller inoshanda mune isina waya modhi uchishandisa Bluetooth 5.1, kana mune "wired" USB mode nekuibatanidza iyo zvakananga kuPS5 uchishandisa yakasanganisira USB tambo.
Ko iyo DualSense isina waya inodzora inouya nhema (kana chero imwe vara)?
Mune ramangwana, mamwe mavara achave aripo. Asi hapana zviziviso zvekugovana panguva ino.
Ndinogona here kushandisa iyo DualSense isina waya controller neangu PS4 koni?
Iyo DualSense isina waya controller haina kuenderana nePS4 koni.
Ndinogona here kushandisa yangu iripo DualShock 4 waya isina waya nePS5 yangu?
Pamitambo yePS4 yakatambwa paPS5, vatambi vanogona kushandisa ingave DualShock 4 isina waya controller kana iyo DualSense isina waya controller.
Mitambo yePS5 inoda kushandiswa kweDualSense wireless controller, sezvo akagadzirwa kuti atore mukana wayo unonyudza maficha.
Kune akanakisa ePS VR ruzivo paPS5, tinokurudzira kushandisa DualShock 4 isina waya controller. Sarudza mitambo ingangoda vatambi vePlayStation Mov vanofamba kana kuenderana neiyo PlayStation VR Chinangwa controller. Iyo nyowani HD Kamera yePS5 haienderane nePS VR.
Mitambo yePS VR inodawo iyo PS Kamera (PS4) uye yePS kamera adapteri.
Ndinogona here kushandisa iyo DualSense waya isina waya nePC yangu?
Remote Play paPC inotsigira iyo DualSense isina waya controller kuburikidza ne USB wired kubatana.
Ndinogona here kushandisa vechitatu-bato vanodzora, seiyo SCUF Vantage kana Astro C40 TR, ine PS5?
Vatungamiriri varipo "vehunyanzvi" vakagadzirirwa uye vane marezinesi ePS4 koni, senge mavhiri ekutyaira uye arcade zvimiti zvekurwa, zvinoshanda paPS5 kana iyo PS5 kana PS4 mutambo uchiitsigira.
Vanotenderwa vatongi vePS4 vane yakajairwa gamepad formfactor, senge iyo SCUF Vantage uye Astro C40 TR, ichashanda nemitambo yePS4 yakatambwa paPS5. Ivo havana kutsigirwa nekutamba mitambo yePS5.
Ini ndinobatanidza sei iyo DualSense isina waya controller kuPS5?
Pairing iri nyore: ingobatanidza iyo DualSense isina waya controller kuPS5 uchishandisa yakasanganisira USB tambo, uye batidza iyo controller nekudzvanya bhatani rePS.
Ndeapi mahedhifoni anowirirana neiyo DualSense isina waya controller's headset jack?
Misoro yemusoro inogona kubatanidzwa kuburikidza neyemusoro jack inotsigirwa.
Ndeapi mitambo ichavepo yekutengwa pazuva rekutanga rePS5?
Ona pazasi kune yazvino runyorwa rwemazita akarongerwa izvozvi kune ese 2020. Iri runyorwa ibasa-riri-kufambira mberi uye rinogona kuchinja. Aya mazita anowanikwa musi waNovember 12 kana Mbudzi 19, zvichienderana nedunhu.
SIE Yepasirese Studios Mitambo: Zuva rekutanga
Imba yekutamba yaAstro (Japan Studio) (Yakagara-yaiswa paPS5)
Midzimu yeDhimoni (SIE Pasi Pose Studios, Mitambo yeBluepoint)
Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Mitambo yeInsomniac)
Kushamisika 's Spider-Man Yakagadziriswa (inosanganisirwa ne Marvel's Spider-Man: Miles Morales Yekupedzisira Edition) (Mitambo yeInsomniac)
Sackboy: A Big Rwendo (Sumo Dhijitari)
SIE Yepasirese Studios Mitambo: Zvakare Mukuvandudza
Zvakare zvakasimbiswa kuve mukuvandudza kubva kuWorldwide Studios: Kuparadza AllStars (Mitambo yaLucid), Kudzosera (Mitambo Yemumba), Horizon Yakarambidzwa West (Guerrilla), Ratchet & Clank: Rift Kuparadzanisa (Mitambo yeInsomniac), Gran Turismo 7 (Polyphony Dhijitari), uye iyo inotevera yekupinda mune Mwari weHondo akateedzana (Santa Monica Studio)
Mitambo Yechitatu-Bato: Zuva rekutanga
bugsnax (Mahosi Madiki)
Ongorora: inowanikwa pakuvhurwa paPlayStation 5 kune vanyoreri vePlayStation Plus pasina imwezve mutengo kusvika Ndira 4, 2021!
Dead nokuda Daylight (Maitiro)
Dhiyabhorosi May Mhere 5 Special Edition (Mutengo)
Dota 5 (Codemasters)
Mambo Oddball (10Matani Ltd)
No Romunhu Sky (Mhoro mitambo)
Mucherechedzi: System Redux (Bloober)
Kunyanyisa! Zvese Zvaunogona Kudya (Chikwata 17)
Iyo isina (Annapurna)
Planet coaster (Muganhu)
Warhammer: Chaosbane Slayer Shanduro (Nacon)
Tarisai Imbwa Legio (Ubisoft) (Dhijitari nyika dzese kunze kweChina neJapan. Pakutanga 2021 yeJapan)
WRC 9 FIA Yenyika Rally Championship (Nacon) (Dhijitari nyika kunze kweChina neJapan. Kutanga 2021 kuJapan)
Ndeipi mimwe mitambo yePS5 inosimbiswa kuve mukusimudzira?
Kune huwandu hukuru hwemitambo yakasimbiswa kuve mukuvandudzwa kwePS5, yakawandisa kunyora zvizere pano. Ndokumbirawo kuti murambe muchiongorora PlayStation.Blog uye PlayStation.com kuitira kugadzirisa pane zvichaunzwa munguva yemberi.
Pane musiyano mukuita here kana ndikasarudza kumisikidza mutambo wePS5 kubva kuBlu-ray Disc, maringe nekutenga iyo digitally uye kurodha pasi?
Kwete, kana mutambo wacho waiswa kune iyo yekumhanyisa-kumhanyisa SSD, mashandiro acho anenge akafanana kana iwe ukaisa mutambo kuburikidza neBlu-ray Disc kana kuutora kuburikidza neStartStation Store.
Ndinogona here kumisa mutambo wePS5 ndobva ndautangazve kubva pandakambomira?
Zvakawanda senge paPS4 koni, kana iwe uine mutambo uchimhanya uye iwe ukaisa yako PS5 mune rest mode, kana kutanga midhiya app, mutambo uchatangazve kwawakasiya kana iwe wagadzirira kutamba zvakare.
Kana iwe ukatanga wechipiri mutambo wePS5 kana simba rakazara kubva paconsole, mutambo wekutanga wawanga uchitamba unobva wavhara otomatiki, uye hauzotangiri wega kubva panguva yako yapfuura yemutambo. Nekudaro, nekuda kwePS5's-yakakwira-kumhanyisa SSD, iwe unozokwanisa kurodha zvakare mune yako yakaiswa PS5 mutambo nekukurumidza uye kudzoka zvakare kunotamba.
Mitambo yePS5 yakavharwa mudunhu here?
Ini ndinogona kuwana yangu yedhijitari mutambo muunganidzwa kubva chero PS5? Kana zvakadaro, sei?
Vatambi vanogona kupinda mukati kune chero koni neakaundi yako ye PlayStation uye vanowana zvemukati pavanopinda mukati. Izvi zviri nyore kuita uchishandisa iyo nyowani PlayStation App yemafoni nhare, iyo inobvumidza vatambi kusaina kusaina kune koni kubva kuapp pasina kupinda yako pasiwedhi pachiratidziri nemutongi.
Rondedzero yangu yePS5 Trophy ichaparadzaniswa kubva kune mamwe maPS Trophies?
Trophy rondedzero ichasanganisa PS3, PS Vita, PS4, uye PS5 Trophies, yakarongedzwa zvichiteerana maererano neodha weakanyanya kuvhurwa.
Trophies achangobva kuona zvimwe zvinogadziridzwa - verenga pamusoro pezvinhu zvitsva pano.
Iko kune chero shanduko kune kudzoserwa pakutenga kwedhijitari? Vachave vakasiyana here kana ndikatenga PS5 Dhijitari Yekutsikisa Dhidhiyo?
PlayStation Chitoro chekudzorera uye kudzima marongero acharamba akafanana. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve United States marongero ekutenga edhijitari, ndapota shanya: https://support.playstation.com/s/article/Requesting-a-Refund
Kutamba Mitambo yePS4 paPS5
Ndinogona kutamba mitambo yePS4 paPS5?
Hongu. Kana iyo PlayStation 5 koni yatanga iyi Mbudzi, inopfuura 99 muzana yemitambo 4000+ inowanikwa paPS4 ichatamba pairi.
Dzidza zvakawanda nezve kutamba mitambo yePS4 paPS5 pano.
Ko mitambo yePS4 ichabatsirwa nekutamba paPS5?
Hongu. Sarudza PS4 mitambo ichaona yakawedzera kurodha kumhanya painotambwa paPS5, uye zvakare ichakwidziridza Game Boost, ichipa yakagadziridzwa kana yakagadzikana mafiratifomu. Mimwe mitambo ine maforamu asina kuvhurwa kana resolution ine simba kusvika ku4K inogona kuona kutendeka kwepamusoro.
PaPS5, PS4 mitambo inobatsirwa neMutambo Wokusimudzira otomatiki, uye haidi kuti ubatwe kana kubviswa sePS4 Pro's Boost Mode ficha. Pamusoro pezvo, mitambo yePS4 ichatora mukana weimwe yePS5 nyowani yeUX maficha.
Pamusoro pezvo, kana mutambo wePS4 ukatsigira zvigadziriso zvePS4 Pro senge yakagadziridzwa mifananidzo, resolution dzakakwira, kana kuwedzerwa mashandiro uye maforamu, izvi zvichave zviripo mune yePS5 Gameplay ruzivo.
Ko PS5's-yakakwira-kumhanyisa SSD inopa chero bhenefiti yekutamba PS4 kana PlayStation VR mitambo?
Mitambo yePS4 uye PlayStation VR inoremerwa nekukasira kana ichengetwa uye ichatambwa kubva kuPS5 yemukati SSD, asi havazoregedza kugona kuzere-chizvarwa kugona kweiyo SSD.
Ndingatamba mitambo yePS4 kubva paUSB drive?
Hongu. Kuchengeta mitambo yePS4 uye kuitamba kubva paUSB drive inzira yakanaka yekuwana mitambo yePS4 paPS5 uye kugonesa kuwana nyore mitambo yePS4 pasina kuda kushandisa chero chengetedzo yemukati yePS5. Tinokurudzira kuita izvi kuchengetedza nzvimbo pane yemukati koni yekuchengetedza mitambo yePS5, isingagone kutambwa ichibva pane yakawedzerwa kuchengetedza mota.
Vatambi vanogona zvakare kuseta sisitimu inodiwa paPS5 iyo, nekumisikidza, inoisa mitambo yese yePS4 (inosanganisira kutenga zvemadhijitari kubva kuPlayStation Store, uye data remitambo kubva kuBlu-ray discs) uye zvigamba zvemitambo zvenguva yemberi zvakananga kune yakabatana USB drive.
Cherechedza: Haasi ese madhiraivha eUSB anoshanda nePS5. Yekuwedzera yekuchengetera mota haigone kushandiswa kuburikidza ne USB hub, uye maviri kana anopfuura akawedzeredzwa ekutyaira anotyaira haagone kuunganidzwa kuPS5 panguva imwe chete.
Pane here imwe mhando ye USB drive yandinofanira kushandisa kuchengeta PS4 mitambo yekutamba pane yangu PS5?
Shandisa SuperSpeed ​​USB kana nekukurumidza (USB 3.0 kana gare gare) yekuchengetera dhiraivha ine 250 GB shoma uye 8 TB yakanyanya kukwana, yakamisikidzwa ye exFAT (chinyorwa: PS5 inogona fomati yakabatana inoenderana USB drive ye exFAT). Midziyo ine kutsanangurwa nekukurumidza inogona kukonzeresa ipfupi mutoro nguva yemitambo yePS4 yakachengetwa padrive.
Kana ndikatenga madigital PS4 mitambo ku PlayStation Store, ndinogona kuodhaunirodha paPS5?
Hongu. Kana iyo PlayStation 5 koni yatanga iyi Mbudzi, inopfuura 99 muzana yemitambo 4000+ inowanikwa paPS4 ichatamba pairi. Tarisa ku iyi guhttps://twinfinite.net/2020/10/ps5-backward-compatibility-ps4/pano mamwe mashoko.
Ko PS4 mademo kana mabheas angatambe paPS5?
Iyo mizhinji yenhaka yePS4 mademo uye mabheji haazotambe paPS5. Kufambira mberi, zvakadaro, madhemoni matsva uye mabheas achange achitamba paPS5.
Pane chaiwo PS5 uye PS4 shanduro dzemitambo?
Hongu. Mitambo yePS5 yakasarudzika uye yakanyatsogadzirwa kuti itore mubhenefiti yakasarudzika yechizvarwa chinotevera checonsole yemitambo, kusanganisira iyo DualSense isina waya yekudzora haptic mhinduro uye zvinokonzeresa, nguva dzekumhanyisa-kukurumidza, zvinowedzeredzwa uye 3D Audio.
Kana ndiine mutambo wePS4, ndinogona kuusimudzira iwo kuPS5 vhezheni?
Mimwe mitambo yePS4 inogona kukwidziridzwa kudigital PS5 yemutambo pane iyo PS5 koni. Paunenge uchishandisa PS5 koni, iwe unogona kuve nesarudzo yekukwiridzira dhisiki kana dhijitari PS4 mutambo kudigital PS5 vhezheni. Zvichienderana nemutambo, kusimudzira uku kunogona kuitika pasina mari yekuwedzera, kungangoda kutenga, uye kunogona kuwanikwa kwenguva pfupi. Indaneti inodiwa.
Semuenzaniso, iyo PS4 vhezheni ye Marvel's Spider-Man: Miles Morales, uye iyo PS4 vhezheni yeSackboy: A Big Adventure zvese zvinopa kukwidziridzwa kudigital PS5 shanduro dzemitambo pasina imwezve mutengo. Kana iwe uine yako PS4 vhezheni yemitambo iyi, ingo shanyira Hub yemutambo wezita iri paPS5 yako (Cherekedza: iwe uchafanirwa kuisa iyo PS4 disc mune yako PS5 koni kutanga kana watenga dhiziri repanyama kwete iyo PS Chitoro vhezheni mutambo wePS4), uye iwe uchaona kupihwa kurodha pasi iyo PS5 vhezheni.
Ndokumbira utarise: Blu-ray discs haienderane nePS5 Dhijitari Dhizaini. Kana iwe uine yako PS4 Blu-ray discs, haugone kuishandisa nePS5 Digital Edition koni, kusanganisira kudzikunura zvinopihwa zvekusimudzira mutambo wePS4 kune iyo PS5 vhezheni. Iwe unogona, zvakadaro, kusimudzira yakakodzera mitambo yemadhijitari.
Kana ndikasasimudzira mutambo wangu wePS4 kuPS5 vhezheni, kana kana pasina iyo PS5 vhezheni, ndinogona here kutamba PS4 vhezheni yemutambo paPS5?
Ehe, kana iyo PS4 vhezheni yemutambo ichienderana paPS5, ichave inogona kutamba paPS5 isina kukwidziridzwa. Kupfuura 99% yemitambo 4,000+ PS4 inoenderana nePS5. Tarisa ku uyu mutungamiri mamwe mashoko.
Kana ndiine PS4 mutambo disc, asi ini ndine yangu PS5 Dhijitari Edition, ndinogona kukwidziridza mutambo wangu?
Kwete, haungakwanise kukwidziridza iyo chaiyo kopi kana kuitamba pane koni, nekuti iyo PS5 Dhijitari Dhizaini haina kusanganisira Blu-ray disc drive.
Ndinoendesa sei yangu PS4 mutambo kusevha mafaera kuPS5?
Vatambi vanogona kuendesa mutambo chengetedza mafaera kubva kuPS4 koni kuenda kuPS5 uchishandisa tambo yeLAN, nekubatanidza zvisina waya (WiFi), kana kusevha mafaera ekuchengetedza kune inoenderana USB drive. Uye kana iwe uri anoshanda PS Plus nhengo, unogona kuendesa yako PS4 mutambo kusevha kune yako PS5 uchishandisa gore chengetedzo.
Ini ndinogona kuendesa kuchengetedza mutambo kufambira mberi kubva muPS4 mutambo kuenda kuPS5 vhezheni yemutambo iwoyo?
Iko kugona kwekuchinjisa mutambo kunochengetedza pakati pePS4 vhezheni uye yePS5 vhezheni yemutambo mumwe chete isarudzo yekuvandudza uye ichasiyana musoro wenyaya nemusoro wemitambo yemuchinjikwa.
For Marvel's Spider-Man: Miles Morales, kana vatambi vakasarudza kukwidziridza kubva kuPS4 kuenda paPS5, avo masevha anoponesa anozoendesa. Sackboy: A Big Adventure zvakare ichatsigira mutambo kuchengetedza kuendesa kubva kuPS4 kuenda kuPS5 mune yekuvandudza iyo ichaunzwa pamberi pekupera kwegore.
Ongorora: Kana vatambi vakatanga vatenga PS4 mutambo disc, iyo PS5 koni ine Ultra HD Blu-ray disc drive inofanirwa kukwidziridza kuPS5 vhezheni yemutambo uye kuendesa masevha avo pamusoro.
Ko online multiplayer inoshanda sei nemitambo yePS4 painotambwa paPS5?
Kunyangwe iwe uri kutamba mutambo wevazhinji PS4 mutambo pane yako PS4 kana PS5 (kuburikidza nekudzokera kumashure kuenderana), iwe unozogona kutamba nevamwe vatambi pane chero koni yemutambo mumwe chete.
Kana ndiri kutamba mutambo wePS4, ndinogona kutamba neshamwari yangu iri kutamba iyo PS5 vhezheni yemutambo iwoyo, kana zvinopesana?
Izvo zvinokwanisika kutamba pamwe zvinoenderana nemutambo, asi rutsigiro runofanirwa kupihwa neyekugadzira mutambo.
Vatambi vePS4 nePS5 vanogona kutaurirana kuburikidza nezwi kutaura?
Ehe, vatambi vePS4 nePS5 (uye vashandisi veiyo nyowani PlayStation app yemafoni nhare) vanogona kutaurirana kuburikidza nezwi kutaura mumapato. Zvichienderana nemutambo, mu-mutambo hurukuro ichashandawo muPS4 uye PS5 shanduro dzemutambo.
Mutambo unokoka sei kushanda pakati pePS4 nePS5?
Vatambi vanozokwanisa kutumira uye kugamuchira kukokwa kwemitambo inotsigira cross-gen play mhiri kwePS4 nePS5. Kana PS5 yatanga chete, kana iwe ukatambira kokero yekujoinha chikamu chemutambo, chiziviso chinoratidza kuti inotsigira mutambo upi. Kana mutambo wePS5 usina PS4 vhezheni iripo, vatambi vePS4 havazogashira iyo kokero.
Ndicharamba ndichiwana raibhurari yangu yePS4 PlayStation Plus yemitambo paPS5?
Hongu. Kana mutambo wePS4 uchitambika paPS5, uye uchiri nhengo yePlayStation Plus, iwe unozokwanisa kuutora muPS5 yako nekutamba.
Ko PS Zvino ichave iripo paPS5?
Ehe, vatambi vane PS Zvino kunyoreswa vanozogona kushandisa PlayStation Zvino nePS5 yavo, zvese zvekutepfenyura uye kurodha pasi yemitambo yakatsigirwa.
Ko PlayStation Plus ichapa mitambo yePS5?
Nhengo dzese dze PlayStation Plus dzichaenderera mberi nekugamuchira kana angangoita maviri makuru PS4 mitambo mwedzi wega.
Icho chinangwa chedu kuwedzera mitambo yePS5 kazhinji pamitambo yemitambo yemwedzi nemwedzi, saka tarisa kudzoka nesu kuPS Blog kune edu ekuzivisa ePlayStation Plus.
Chii chinonzi PlayStation Plus Unganidzo?
Nhengo dze PlayStation Plus varidzi vePS5 vanozokwanisa kudzikinura nekutamba raibhurari yakamisikidzwa yemitambo yePS4 yakatsanangura chizvarwa, saBatman: Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, Mwari weHondo, Monster Hunter: Nyika, Persona 5 uye zvimwe zvakawanda. .
Mutambo we PlayStation Plus uchavepo munaNovember 12 apo PS5 ichatanga muUS, Japan, Canada, Mexico, Australia, New Zealand neSouth Korea, naNovember 19 apo PS5 inotanga pasi rese, kusanganisira Europe, Middle East, South America, Asia neSouth Africa.
Huwandu uye kuwanikwa kwemazita muThe PlayStation Plus Unganidzo zvinogona kusiyana nenyika, uye Iyo PlayStation Plus Unganidzo haisi kuChina.
Ndeapi mitambo inosanganisirwa neiyo PlayStation Plus Unganidzo pakuvhurwa kwePS5?
Iyo PlayStation Plus Unganidzo ichave yekuwedzera bhenefiti yezviripo mabhenefiti ayo nhengo dzePlayStation Plus dzinogashira iwoyo iwoyo mukuru mutengo wekunyorera. Kamwe mutambi paanodzikinura mutambo kubva ku PlayStation Plus Unganidzo, vanogona kuchengeta mitambo chero bedzi ivo vari anoshanda PlayStation Plus nhengo. Mitambo yePS4 yakadzikinurwa kubva kuPlayStation Plus Unganidzo uye yakatambirwa paPS5 ichaona mabhenefiti senge kuwedzera kukwirisa kumhanya uye kuvandudzwa kana mafiratifiti akatsiga nePS5's Game Boost.
Kubva kuSIE Yepasirese Studios:
Detroit: Vanova Human
Anonyadzisa Mwanakomana wechipiri
Ratchet uye Clank
Uncharted 4: Kuguma Kwembavha
Kubva kune vedu vechitatu-bato vaparidzi uye vanogadzira:
Kudanwa Kwebasa: Nhema Ops III - Zombies Makore Edition
Kuputsa Bandicoot N. vakadzikama Trilogy
Final Yekufungidzira XV Royal Edition
Kugara Zvakaipa 7 biohazard
Ini ndinogona kutamba yepakutanga PlayStation, PS2, kana PS3 mitambo paPS5?
Kwete, PS5 ichatamba mitambo yePS5 uye inopfuura 99% yemitambo yePS4, kusanganisira mitambo yePlayStation VR, chete.
PS5 Blu-Ray Diss
Ndeapi mavhidhiyo mafomu disc anotsigirwa nePS5 koni?
Iyo PS5 console vhezheni ine Blu-ray disc drive inotsigira kutamba kwevhidhiyo kubva ku4K Ultra HD Blu-ray Discs, standard Blu-rays, uye maDVD. Ndokumbira utarise kuti iyo PS5 Dhijitari Yekutsikisa koni haitsigire chero Optical discs.
Ko PS5 mutambo discs inobata yakawanda data kupfuura PS4 discs?
Hongu. PS5 Blu-ray discs inokwanisa kuchengeta kusvika ku100GB yedata yemutambo, zvichienzaniswa neye 50GB yekuchengetedza inopihwa nePS4 Blu-ray discs.
Ko iyo PS5 koni inotamba PS4 Blu-ray discs?
Ehe, maPS4 Blu-ray discs anowirirana nePS5 koni, chero mutambo wePS4 uchitsigirwa. Tarisa ku uyu mutungamiri kuti uwane rumwe ruzivo nezve kutamba PS4 mitambo pane iyo PS5 koni. Ndokumbira utarise kuti iyo PS5 Dhijitari Yekutsikisa koni haitsigire chero Optical discs.
PS5 inotsigira 3D Blu-ray mafirimu here?
Kwete, 3D stereoscopic kuburitsa haitsigirwe paPS5.
PS VR, Media Controller uye Zvimwe PS5 zvishongedzo
PS VR, PS Kamera, PS Mira Anodzora, PS VR Chinangwa Chekuita
Ndinogona kutamba mitambo yePS VR paPS5?
Ehe, mitambo ye PlayStation VR inosanganisirwa pakati pezviuru zvemitambo yePS4 inotambika paPS5. Kutamba mitambo yePS VR pane PS5 kunoda PS VR headset, PlayStation Kamera yePS4 * uye neAdapterStation Kamera.
Iyo PS VR mahedhifoni, PS Kamera, DualShock 4 waya isina waya, PS Kufambisa vatongi, uye PS VR Chinangwa mutungamiriri zvese zvinotengeswa zvakasiyana nePS5.
* Muenzaniso CUH-ZEY1 kana CUH-ZEY2
Ndinogona here kushandisa PS4's PS Kamera nePS5?
Hongu. PS Kamera inozodiwa kuPS VR uye PS Mov mutambo wemitambo yemitambo inotsigirwa yePS4 paPS5. PS Kamera inotsigirawo kutepfenyura paPS5.
Kubatanidza PS Kamera kuPS5 kunoda iyo PlayStation Kamera adapta.
Ndinogona here kushandisa PlayStation Mira vanodzora vanodzora kana iyo PS VR Chinangwa Chekuita nePS5?
Hongu, unogona kushandisa vatambi vePlayStation Movha kana iyo PS VR Chinangwa Chekudhira mumitambo inotsigirwa yePS4 paPS5, kusanganisira PS VR software. Iwe unozofanirwa kubatanidza iyo PS Kamera kuPS5 kugonesa PS Kufambisa kana PS VR Aim Controller rutsigiro, iyo inoda iyo PlayStation Kamera adapta.
Ini ndinowana sei iyo PS Kamera adapta?
kushanya playstation.com/camera-adaptor nokuti mashoko.
Chii chinonzi HD Camera?
Iyo HD Kamera yePS5 inoratidzira maviri anononoka, akareba-enguru lens lens 1920 × 1080 makamera ayo anogona kuyera kudzika kwenzvimbo - inobatsira pakunamatira musana kubva panhepfenyuro. Iyo PS5 Kamera inosangana kuburikidza ne USB Type-A chinongedzo kuseri kwekoni.
Ndeapi matanho epanyama uye huremu hweiyo HD Kamera?
Izvo zviyero zvakada kuita 100mm x 41mm x 75mm (upamhi x kukwirira x kudzika), uye inorema ingangoita 92g. Iyo tambo kureba ingangoita 2 metres.
Ndingashandisa PS5'snyowani HD Kamera ine yangu PS VR mahedhifoni?
Kwete, iyo nyowani HD Kamera haizotsigire PlayStation VR. Iwe unofanirwa kushandisa iyo PlayStation Kamera uye iyo PlayStation Kamera adapter kuti ubatanidze kune yako PS5.
Pane maikorofoni yakavakwa mukamera here?
Kwete. Iwe unozogona kushandisa mahedhifoni, kana iyo DualSense isina waya mutyairi yakasanganiswa mic.
Chii chinonzi Media Remote?
Iyo Media Remote ndiyo sarudzo iri nyore yekutarisa mafirimu uye zvinoratidzwa paPS5. Inosanganisira mabhatani akazvitsaurira eanofarirwa ekushambadzira maapplication, ekudzora ekudzora, uye yekudzora pad pad.
Ndeapi masimba epanyama uye huremu hweMedia Remote?
Izvo zviyero zvakada kuita 45mm x 145mm x 26mm, kusanganisa iyo huru fungidziro, uye inorema mukati ingangoita 55g.
Ndinogona here kushandisa Media Remote kutamba mitambo?
Kwete, iyo Media Remote yakagadzirirwa chete kupa yakapusa, yakapusa nzira yekutarisa vhidhiyo zvemukati paPS5.
Inomhanya pamabhatiri anotsiviwa kana anodzoreka?
Iyo Media Controller inomhanya pamabhatiri maviri eAA, ayo anosanganisirwa.
Ko iyo Media Remote inotsigira yekuisa izwi?
Iyo mic iri paMedia Remote inogona kushandiswa kududzira izwi nekudzvanya maikoni maikoni paOn-Screen Keyboard painowoneka, kana mukusarudza midhiya zvinoshandiswa zvinotsigira modhi dzekuisa izwi. Iyo bhatani mic mic pane iyo Media Remote yakachengeterwa ramangwana mashandiro.
PS5 Headset uye PS4 mahedheseti
Chii chinonzi PULSE 3D Wireless Headset, uye yakasiyana sei neyekare maStetsStation mahedhifoni?
Iyo PULSE 3D isina waya yemusoro ndiyo musoro wepamutemo wePS5 uye inoratidzira dhizaini yakakwenenzverwa ine mbiri ruzha-rwekudzima maikorofoni, kuchaja kweC-Type-C, uye zvinori-nyore-kuwana zvinodzora zvinosanganisira yakavakirwa-mukati mic mic, tenzi vhoriyamu, uye in- mutambo odhiyo kuti utaure musanganiswa zvinodzora. Bhatani rekutarisa mic rinozvipira rinokutendera kuti utarise kuti unonzwika sei kune vaunotamba navo.
Iwe unogona kubatanidza iyo PULSE 3D isina waya yemusoro kuPS5 yako kana PS4 koni uchishandisa yakasanganisira isina waya adapter. Unogona kushandisa 3.5mm mahedhifoni jack kuti ubatanidze kune mamwe maodhiyo sosi, senge DualShock isina waya controller, PlayStation VR, kana nhare mbozha.
Ndeapi mamiro epanyama uye huremu hwePULSE 3D isina waya yemusoro?
Izvo zviyero zvakada kuita 213mm x 190mm x 91mm, uye inorema ingangoita 292g.
Inguva yakareba sei iyo PULSE 3D isina waya yemusoro bheteri bhatiri rinogara pane imwechete kubhadharisa?
Iyo PULSE 3D Wireless Headset inofungidzirwa kuti ingangogara kweanosvika maawa gumi nemaviri emitambo isina waya uchishandisa bhatiri rayo rakavakirwa-mukati.
Ndinogona here kushandisa yepamutemo Goridhe kana Platinum isina waya mahedhifoni nePS5?
Ehe, iyo yepamutemo Gold Wireless Headset uye Platinum Wireless Headset inotsigirwa natively paPS5, vachishandisa ingave yakasanganisira isina waya USB adapter kana iyo 3.5mm headset jack pane iyo DualSense isina waya controller.
Ndinogona here kushandisa chechitatu-bato mahedhifoni nePS5?
Zvepamutemo marezenisi emusoro kubva kune vechitatu-bato vagadziri achave aripo mushure mekutanga kwePS5. Mamwe mahedhifoni akapihwa marezenisi ePS4 koni anogona kushanda kana angangoda dhizaini firmware yekuvandudza. Ndokumbira utarise nemugadziri wemusoro wako wemibvunzo inoenderana.
Matairesi asina waya kubva kumakambani echitatu-bato anoshandisa chinongedzo cheBluetooth haazotsigirwe paPS5, kunyangwe akawanda mahedhifoni eUSB uye analogog achitsigirwa.
Misoro yemusoro inogona kubatika kune 3.5mm jack, USB-A, kana USB-C ichashandira 3D Audio.
Kuwedzera Peripheral Rutsigiro
Ini ndinogona kubatanidza keyboard uye mbeva nePS5?
Ehe, USB uye Makarobhobhodhi uye mbeva zvinotsigirwa padanho rehurongwa, asi vagadziri vemitambo vachasarudza kana kutsigira padanho remutambo.
Ini ndichave ndinokwanisa kushandisa yangu PS4 kurwa tsvimbo nePS5?
Mazhinji marezinesi ePS4 arcade kurwa matanda anofanirwa kuenderana nemitambo yePS4 inotambika paPS5. Ndokumbira utarise nemugadziri wedanda rako kuti uwane mibvunzo inoenderana.Play Video
Iyo PS5 UX uye maApp
PS5 Mushandisi Chiitiko
Ndezvipi zvaive zvinangwa zveiyo PS5 mushandisi ruzivo (UX)?
Chinangwa chaive chekuona kuti nguva yekutamba yakakosha uye ine chinangwa. Chiitiko chitsva chevashandisi vePS5 (UX) chakanangana nemutambi - kupa chiitiko chechokwadi-chizvarwa nekuwedzera nekukurumidza uye kunyudza, zvinokurumidza kukubatanidza iwe kumitambo mikuru uye nharaunda inofarira mitambo.
Ndeapi mamwe misiyano inozivikanwa muPS5 mushandisi interface kubva kuPS4?
PS5 nyowani UX inosvitsa huwandu hwakawanda hwezvinhu zvakagadzirirwa kuita kuti zviitiko zvako zvemitambo zvive nekukasira, kunyudza, uye kuve wakasarudzika.
Imwe yezvakakurisa ndeye nyowani Control Center, iyo inoshanda senge yakashandurwa vhezheni yePS4 koni yeMenyu Inokurumidza. Imwe chete yekudhindisa yePS bhatani ichaunza Control Center paPS5, ichipa mukana wekukurumidza kune anowanzo shandiswa masisitimu maficha - ese pasina kusiya mutambo.
Zvekuita ndechimwe chinhu chitsva chakagadzirirwa kukuunza padhuze nezvinhu zvakakosha zve Gameplay. Mabasa anoratidzwa kuburikidza ne-e-screen Makadhi muDare Center uye munzvimbo dzemitambo yakatsigirwa, uye zvinokugonesa kuwana mikana mitsva yemutambo, dzokera kuzvinhu zvawakarasa, svetuka wakananga mumatanho kana matambudziko aunoda kutamba, uye zvimwe zvakawanda.
Dzimwe mhando dzeMakadhi dzinosanganisira Game Rubatsiro, Screen Sharing, uye zvimwe. Mamwe makadhi anogona kuiswa mupikicha-mu-pikicha modhi kana pini-kune-parutivi modhi, kuti ugone kuaona pasina kusiya mutambo.
Kuti udzidze zvakawanda nezve chiitiko chevashandisi vePS5, tarisa yedu vhidhiyo yekushanya.
Ko PS5 ichango dhawunirodha zvigamba zvemitambo uye nekuvandudzwa kwemitambo yemitambo yandatamba?
Hongu. Kana auto-kurodha chikamu chikavhurwa uye iwe ukabatana neinternet, PS5 inozongotsvaga yega yega yemitambo yemitambo yaunowanzo kutamba. Kugadziridza kweMitambo kuchadzorawo apo iyo koni iri mune yekuzorora nzira, kana mushandisi akasarudza chimiro chemagetsi chinotendera kubatana kune internet. Paunotamba mutambo, PS5 inozo tsvaga yega yekuvandudzwa kwemutambo.
Ko PS5's UI inotsigira maforodha kana madingindira ekutanga?
Kwete, PS5 haizotsigire maforodha kana madingindira pakuvhurwa.
Ko iyo PS5 mushandisi ruzivo ichapa zviri pamutemo kuvandudzwa kana nhau?
Ehe, varidzi vese vePS5 pasi rese vanowana nhau dzepamutemo kubva kuvashambadziri yemitambo yavanayo kana yekutevera mune yega yega hub hub, pamwe nenyaya dzichangoburwa mumutauro wavo mune yakakosha Kadhi muDare Center, uye muPlayStation App yemafoni nhare.
Pakutangisa, varidzi vePS5 muUnited States vanogona zvakare kushanyira Ongorora pahwindo rekumba kuti vaone dzese dzenyaya idzi pamwechete panzvimbo imwechete, kuti iwe uone izvo zvinoitika nemitambo yaunofarira kana mitambo yawakaisa parutivi. Uye zvakare, Ongorora inokutendera iwe kuwana nhepfenyuro dzepamoyo, yakagovaniswa vhidhiyo, uye mifananidzo iri kufamba munharaunda kubva mumitambo iwe yaunoteedzera, uye kuwana gadziriso kubva ku PlayStation.
Tichada here kurodha pasi yekuvandudza system pazuva rekutanga?
Ehe, pachave nePS5 system software kune yazvino vhezheni pazuva rekutanga.
Kana ndisiri online, ndinogona here kuisa system yekuvandudza kuburikidza ne USB drive?
Ehe, sekufanana nePS4 koni, iwe unozokwanisa kurodha nyowani sisitimu software yekuvandudza kuPC yako kubva kuPlayStation.com uye wochinjisa kuPS5 uchishandisa USB drive yakamisikidzwa yeFAT32.
Chii chinonzi Game Rubatsiro, uye chinoshanda sei?
Game Rubatsiro chikamu-chikamu chikamu chePS Plus nhengo chete paPS5 dzinogona kupa mazano anobatsira, matipi, uye matipi ekukubatsira iwe kuenda kumberi mune yakasarudzwa PS5 mitambo. Iyo ficha ndeye yakasarudzika sarudzo, asi yakagadzirirwa kukurumidza uye nyore pane kutsvaga webhu kune mamwe marudzi matipi uye inofanirwa kukubatsira iwe kudzivirira vapambi vemitambo.
Tarisa yedu PS5 mushandisi ruzivo ruzivo kuti uone mashandiro anoita Game Rubatsiro.
Ndeapi mikana yekuwanika iyo PS5 inopa?
Vatambi vePS5 vanozokwanisa kudzikamisa kana kudzikamisa simba remhinduro haptic uye zvinokonzeresa zvinogadziriswa pane iyo DualSense isina waya controller uye mabhatani ekudzokorora pane iye mutongi.
Izwi rekuraira chimiro chinopa yakapusa uye inokurumidza nzira yevashandisi yekuisa mameseji achienzaniswa nekirabhu chaiyo: ingotaura mazwi uye ivo vanozoonekwa pa-screen. Iyo ficha icha shanda ine mahedhifoni, iyo DualSense isina waya controller's yakasanganiswa maikorofoni, kana iyo Media Remote.
An integrated screen reader inopa vashandisi sarudzo dzekunzwa pa - screen chinyorwa uye vane masimba anoverengwa zvinonzwika. Vashandisi vanogona zvakare kugadzirisa avo ekuratidzira marongero ekushandura mavara, kuita mameseji akakura kana madiki, mavara akasimba, gadzirisa kusiyanisa, shandura ruvara, kururamisa ruvara, auto-scroll scroll, uye kudzikisa masisitimu ekufamba.
Pamusoro pezvo, chikamu chekunyora chitauro chinopa kugona kwenzwi kutaurirana odhiyo kuti inyorwe mumavara, uye zvakare zvinyorwa zvakanyorwa kuti zvitaurwe kune vamwe vatambi mukutaura kwenzwi.
Izwi kududzira, kuverenga screen, uye kutaurirana kudhizaina paPS5 inotsigira mitauro inotevera: Chirungu (US), Chirungu (UK), ChiJapanese, ChiGerman, Chiitaliya, ChiFrench, ChiCanada French, Spanish, Latin American Spanish.
PS Chitoro uye Dhijitari Zvemukati
Is PlayStation Chitoro yakavandudzwa paPS5?
PS Chitoro paPS5 parizvino chakabatanidzwa zvizere muchirongwa nemheni-yekukurumidza kubhurawuza uye akareruka, akangwara marongero anoita kuti zvive nyore kuwana mutambo wakakodzera.
Ndinogona kutenga PS4 uye PS VR mitambo kuPS Chitoro paPS5?
Ehe, chero mitambo yePS4 nePS VR inotambika paPS5 ichavepo yekutengwa paPS5 kuburikidza nePS Store.
Iyo PlayStation App yemafoni nhare inotsigira seiPS5?
Iyo yakagadziridzwa PlayStation App yemidziyo nhare yakafungidzirwa kusimudzira zviitiko zvako zvemitambo pane ese maPS4 nePS5, kusanganisira yakagadziridzwa mushandisi interface, Messages kusangana, izwi chat uye Mapato mapoka, natively akabatanidzwa PlayStation Chitoro uye kure kure kurodha pasi, PlayStation nhau, uye zvitsva maficha yePS5.
Ndingaite sei kubata PS5 kurodha pasi kure?
Iyo nyowani PlayStation App yeIOS (12.2 kana gare gare) uye Android (6.0 kana kuti gare gare) nharembozha inoratidzira chiitiko chekuzvarwa cheStartStation Chitoro chinogonesa kutsanya uye kutsetseka kutenga uye kubhurawuza, nekwanisi yekutenga kure uye kurodha mitambo uye mawedzera-ons zvakananga ku yako PS4 uye PS5.
Kana PS5 yasvika, iwe unozokwanisa kumisikidza kure mitambo, maneja ekuchengetedza pane yako koni, uye nekukurumidza kusaina kuPS5 yakananga kubva kuPS App.
Pamusoro pezvo, unogona kushandisa PlayStation.com kutonga kurodha kure.
Ndekupi kwandichawana yangu yese PS5 uye PS4 mitambo?
Kubva pachiratidziro chemusha chePS5, "Game Library" icharatidza ese PS5 uye PS4 mitambo yawakatenga kana yawakatamba. Izvi zvinosanganisira mitambo iwe yawakakwanisa kutamba sePS Plus kana kunyorera PS Zvino. Kana iko kunyorera kwapera iwe uchazoda kutenga kunyorera kutsva kuti ugone kutamba iyo mitambo zvakare (cherekedza: PS Ikozvino kuwanikwa kwevhisi kunosiyana nenyika).
Ndingawane kupi zvese zvangu zvekuvaraidza uye midhiya maapplication?
Kubva paPS5's Media homecreen, unogona kuwana nekuburitsa midhiya maapplication awakamboshandisa. Mamwe maapplication awakadhonza asi usati waashandisa munguva pfupi yapfuura anogona kuwanikwa muApp Library.
Kana iwe uchida kuyedza chimwe chinhu chitsva, shandisa iyo All Apps hub kurodha pasi app nyowani, kana kushandisa TV & Vhidhiyo hub kuti uwane inokurudzirwa inoratidzira pane ako maapplication uye matsva maapplication ausati watora pasi.
Hauna chokwadi kuti ndeipi app ine bhaisikopo kana chiratidziro chaunofarira? Universal Search inokuzivisa iwe kwaunogona kuiwana uye kukubatsira iwe kusvika ikoko.
Ndeapi maapplication evaraidzo achawanikwa ePS5 pakuvhurwa?
Mapurogiramu anozivikanwa evaraidzo akadai seNetflix, Apple TV +, YouTube, Disney + uye Spotify zvichave zviripo paPS5 pakuvhurwa, asi kuwanikwa kuchasiyana nedunhu. Yekuwedzera app info inogona kuwanikwa pano.
Ko kufambisa maapplication kunosiyana munyika dzese, zvichienderana nekuti ndeapi masevhisi anowanikwa mudunhu?
Ehe, kuwanikwa kweInternet uye account ye PlayStation Network zvichazodiwa, uye masevhisi ekushambadzira angangoda kunyoreswa kwakabhadharwa uye inogona kunge isingawanikwe munyika dzese kana matunhu.
Ini ndinowana sei midhiya maapplication uye masevhisi paPS5?
Midhiya maapplication ari nyore kuwana pane iyo PS5 yekumba chidzitiro, muchikamu chakazvipira cheMedia.
Will PS5 varaidzo maapplication achapa rutsigiro rwe4K resolution uye HDR?
Ehe, kana iyo app ichitsigira izvi maficha.
Ndinogona here kuteerera zvangu mimhanzi ndichiridza paPS5?
Hongu. Spotify ichave inotsigirwa pakuvhurwa, ichigonesa mimhanzi kutamba, kusanganisira seiri-mumutambo kumashure mimhanzi. Vatambi vanogona zvakare kuteerera kumimhanzi kubva kuUSB drive, inosanganisira MP3, FLAC, uye maAAC mafomati.
Bato, Shamwari, uye Network Zvimiro
Hunhu hwemagariro senge Shamwari Rondedzero uye Bato zvichavandudzwa sei nePS5?
PS5 inowedzera pfungwa yeMapati munzvimbo yakatsaurwa ye hangout yako uye inosvika makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe eshamwari dzako. Iwe unogona kugovana zvemukati zvemutambo, ronga mitambo yekutamba, kana kungo bata pamusoro pehurukuro yezwi kana kutumira mameseji nevashandisi muPS99, PS4, uye new PlayStation app yemafoni nhare.
PaPS5, iwo Mapato achangobva kukwidziridzwa anomhanya, ari nyore, uye akapfuma nzvimbo dzekudyidzana. Unoda kutamba mashoma emitambo yakawanda? Svetuka wakanangana nemutambo pamwe nevatambi vako vePati - hapana kumwe kukoka kunodiwa.
Unoda kutaura neshamwari uchiratidzira zvauri kutamba? Kutanga kutaura kweizwi muPati yako uye unogona kumisikidza iyo "Goverana Screen" ficha, iyo inoshandisa yakaderera-latency tekinoroji kuti iwe ugone kukuratidza shamwari izvo zvauri kutamba izvozvi munguva chaiyo, uchichengeta ziso pamutambo wavo kufambira mberi, zvakare .
Unoda kugovana ruzivo rwako rwekutamba? Uchishandisa Kugovana Play (nhengo yePlayStation Plus inodikanwa), unogona zvakare kudzora mutambo wako kushamwari yaunovimba kana kuishandisa kutamba mutambo wemubatanidzwa pamwe chete.
Chinhu chitsva chinonzi Game Base inoshanda senzvimbo yako yekudyidzana pa PlayStation. Game Base inounganidza shamwari dzako dzese, Mapati, hurukuro dzekukurukura, uye nezvimwe munzvimbo imwechete inogara uye inoramba iripo muPS5, PS4, uye neAppStation app nyowani yemafoni nhare, kuti ugare wakabatana neshamwari dzako paPlayStation chero kwauri.
Vangani vatambi vanogona kutora chikamu mukutaura kwezwi muPati chero nguva imwe paPS5?
Unogona kuve nevanhu vanosvika gumi nevatanhatu vanotora nhaurirano yezwi muPS16 nePS4, uye iyo nyowani PlayStation App yemafoni nhare.
Ndeapi Mhuri / Yevabereki ekudzora anowanikwa nePS5?
Kana iwe uri mukuru uine account ye PlayStation Network, unogona kugadzira account yemwana wako uye uve maneja wemhuri. Izvi zvinogona kuitwa muchikamu cheMhuri Management cheakaundi account.
Maneja wemhuri anogona:
Ronga nguva yekutamba.
Manage kutenga kubva kumaneja maneja chikwama.
Manage kupinda kumitambo, mavhidhiyo, uye maapp.
Dzima mameseji uye kutaura nezwi.
Bvisa mavhidhiyo, nhepfenyuro, uye mifananidzo yakagadzirwa nevamwe vatambi.
Sarudza vamwe vakuru mumhuri se "vachengeti." Izvi zvinovatendera kumisikidza uye nekushandura marongero, akadai sekuti yakawanda sei ingashandiswa kubva muchikwama chako, kune vese vana vemhuri nhengo.
Pamusoro pezvo, manejimendi evabereki anotendera maneja wemhuri kuti atange zera rezvirambidzo zvemimwe mitambo nenhepfenyuro, maawa anotamba, mari yekushandisa, kutaurirana nevamwe vatambi, uye kushandisa PlayStation VR.
Ndinogona here kuchinja ID yangu yepamhepo?
Hongu! Ndapota shanya peji ino mamwe mashoko.
Ndingaite here kuti ndigadzirise sarudzo dzangu dzekuvanzika kuti dzioneke paInternet?
Ehe, unogona Kuonekwa Offline. Muchinhu chitsva paPS5, unogona zvakare kuseta chinzvimbo chako ku "Yakabatikana," kurega shamwari nevamwe vatambi vazive kuti varege kukukanganisa.
Ini ndinogona kubatanidza mamwe masevhisi kune yangu PlayStation account?
Hongu. PS5 inopa zvakasanganiswa maficha neSpotify, Twitch, Twitter, uye YouTube, uye iwe unogona kubatanidza account yako kune aya masevhisi.
Kugadzira uye Kugovana Zvemukati
Inoita sei nyowani Gadzira bhatani pane iyo DualSense isina waya controller inoshanda?
Bhatani reKugadzira rinopa vatambi kugona kubata inguva chaiyo mumutambo wavo wemitambo. MuGadzira menyu, unogona kusarudza kuchengetedza chikamu chemutambo wako wekare, tanga kurekodha kwebhuku, tora skrini hombe, kana nhepfenyuro yemutambo.
Pamusoro pezvo, madhairekitori akajairika ayo vatambi vanoda kuchinja (kurekodha resolution, skrini fomati, kunyangwe kusanganisira izwi rekutaura odhiyo mukurekodha) anowanikwa zvirinani pasina kusiya mutambo.
Ndeupi urefu hwevhidhiyo wandingatora paPS5?
PS5 inotora otomatiki maminetsi makumi matanhatu ekupedzisira emutambo. Kuti uchengetedze vhidhiyo, iwe unodzvanya bhatani reGadzira uye sarudza "chengetedza mutambo wapfuura." Ikoko, unogona kusarudza zvishoma semasekondi gumi nemashanu ekupedzisira, kusvika pamaminetsi makumi matanhatu ekupedzisira echikamu chako chekutamba.
PS5 inobata otomatiki maminetsi makumi matanhatu apfuura emutambo wako wemutambo pa60 resolution. Kugadziriswa kwe1080K inowanikwawo kana iwe uchinyora manyore mutambo wako wekushandisa uchishandisa Gadzira bhatani.
Ndechipi chisarudzo icho vhidhiyo yezvinyorwa ichatorwa?
Nokusingaperi, vhidhiyo yakanyorwa yakachengetwa pa1080p uye anosvika makumi matanhatu mafuremu pasekondi. 60K vhidhiyo yekurekodha inowanikwawo kana iwe uchinyora manyore mutambo wako wekushandisa uchishandisa Gadzira bhatani.
Pane marongero muGadzira Menyu inonzi Manual Kurekodha Resolution, inoonekwa kana PS5 yako yakabatana ne4K inokwanisa TV. Vatambi vachakwanisa kusarudza pakati pe 1920 × 1080 (default) kana 3840 × 2160. Iyo yekumira inogara kusvikira iwe kana mumwe mutambi pane yako koni achichinja kana kubatanidza iyo koni kune isiri-4K TV.
Zviripiko zvidzitiro zvangu zvakatorwa zvevhidhiyo zvakachengetwa paPS5?
Akatorwa skrini uye mavhidhiyo anochengetwa kuMedia Gallery paPS5. Iyo Midhiya Garari inowanikwa muMitambo yekumusoro skrini, uye inobvumira kuona, kugadzirisa, kugovana, kuteedzera kune USB drive, uye kutamba kweUSB-based media.
Ndingaite sei kuti ndichengetedze vhidhiyo nemifananidzo yandinorekodha paPS5 kune chimwe chishandiso?
Vatambi vanogona kusarudza mifananidzo nemavhidhiyo uye kuteedzera kune yekunze USB drive.
Ndedzipi sarudzo dzandinadzo dzekuburitsa yakatorwa vhidhiyo? Ini ndinogona kuyerera kana kutumira vhidhiyo mu4K kubva paPS5 yangu kuenda kune ekunze masevhisi?
1080p uye 4K vhidhiyo inogona kugoverwa kune ekunze masevhisi, asi iyo resolution yekuburitsa inogona kuderedzwa zvichienderana neyakagovaniswa chikuva.
Ndeapi mafomati uye zvisarudzo zvandinogona kutora zvidzitiro paPS5?
Iwe unogona kusevha screenshots seJPEG kana PNG mafomati pa 1920 × 1080 kana 3840 × 2160 resolution. Vatambi vanogona zvakare kutora (uye kuona) HDR screenshots kana PS5 yakabatana neiyo HDR kuratidza. Kana HDR screenshots yatumirwa kunze kana kugoverwa, PS5 inovashandura kune yakajairwa JPEG mufananidzo.
Ndekupi kwandinogona kugovana zvemukati pakuvhurwa?
Vatambi vanogona kugovana screenshots nemavhidhiyo clip (anosvika pamaminetsi matatu kureba) neshamwari mumapati avo paPS3 kana PlayStation App yemafoni nhare. Vatambi vanogona zvakare kugovana kune ekunze masevhisi anosanganisira Twitch, Twitter, uye YouTube.
Ndinogona here kutumira zvandinogovana zvemukati kune iyo nyowani PlayStation App yemafoni nhare kuti zvive nyore kugovana nhare?
Vatambi vanogona kugovana mifananidzo nemavhidhiyo mumaParty kuburikidza neGame Base, uye izvo zvemukati zvinoonekwa pane nyowani PlayStation app yemafoni nhare.
Iyo PS5 inopa yekubata mudziyo wekutsigira?
Hongu. PS5 inobvumidza kushandiswa kwekunze HDMI-yakavakirwa kutora zvigadzirwa nekuremadza HDCP muMenu yeMenu.
Ndedzipi gadziridzo dzinogovaniswa naShe Factory Factory paPS5 inopa pamusoro peShare Fekitori paPS4?
Goverana Fekitori Studio ine simba midhiya mupepeti wePS5 yako. Iyo app inopa yakanyanya kusimba seti yekugadzirisa maficha pane yakakosha yekukurumidza-yekugadzirisa ficha yeako Gameplay kubatwa. Goverana Fekitori Studio paPS5 inopa seti nyowani yezvishandiso uye zvakawanda zvitsva maficha, senge 4K HDR vhidhiyo rutsigiro. Gadzira zvishamiso zvinoonekwa uye ugovane navo kune vamwe kuti vaone!
Chii chinonzi Kugovana Screen uye Kugovana Play?
Goverana Screen chinhu chitsva chePS5. Goverana Screen inobvumidza mushandisi kutepfenyura yavo yemutambo skrini munguva chaiyo kusvika kunana 16 Mapato enhengo mune yekutaura kweizwi. Funga nezvazvo sediki-diki mutambo mutambo wenhepfenyuro pakati peshamwari.
Ndichiri kushandisa Share Screen, mutambi anogona kushandisa Share Play (anoshanda PlayStation Plus kunyoreswa kunodiwa), kupfuudza "rakarongeka controller" kune mumwe wezwi chat chatora chikamu, uyo anogona ipapo kutamba mutambo ari kure kweinosvika awa rimwe apo Bato richiramba richiona uye tauriranai.
Goverana Kutamba zvakare inobvumidza kusvika kune vaviri vatambi kuti vatambe yemuno co-op mutambo pamwe chete, kunyangwe kana mumwe mutambi asiri wake mutambo.
Ini ndinogona kuendesa yangu yakabatwa midhiya (Gameplay clip, screenshots) kubva kuPS4 kuenda kuPS5?
Kwete, kunyangwe iwe uchigona kuendesa kunze kuburikidza neyakavakirwa-muKutora Gallery application kune inoenderana USB drive kubva kuPS4 koni yako yekuchengetedza.
Vangani vashandisi vanogona kusaina muPS5 imwe?
Kusvika kuvashandisi gumi nevatanhatu vanogona kunyoreswa kune imwechete PS16, uye vanosvika vashandisi vanokwanisa kupinda panguva imwe chete.
Ko PS5 ine webhusaiti yewebhu here?
Kwete, iyo PS5 system haina kusanganisira yakatsaurwa webhu browser.
Remote Play paPS5 inoshanda sei?
Vatambi vanozokwanisa kuwana yavo PS5 kubva kuPc kana nhare mbozha kuburikidza neRemote Play nenzira imwecheteyo sePS4. Uine PS5, iwe zvakare unokwanisa kuwana yako PS5 kubva kuPS4 koni kana imwe PS5 kuburikidza neRemote Play.
Dzidza zvakawanda nezve Remote Play, kusanganisira maapplication ekurodha pasi, pano .
Pane here zvimwe shanduko kuRemote Play nekutanga kwePS5?
Tiri kugadzirisa PS4's Remote Play ficha. Iye zvino, pamusoro pekukwanisa kuwana yako PS4 kubva paPC kana nhare mbozha, yako PS4 inokwanisa kuwana zvimwe zvinyaradzo kuburikidza neRemote Play futi, chaipo paTV yako. Izvi zvinosanganisira kugona kubatanidza kune yako PS5 uye kuyerera iyo PS5 mutambo kune yako PS4 kuti iwe ugone kuitamba ipapo.
Pamusoro pezvo, Remote Play ichawedzera rutsigiro rwevashandisi vanosvika vatatu kuti vabatanidze chikamu cheRemote Play, icho chinobvumira vashandisi kunakidzwa nemitambo yemuno yevatambi vazhinji kuburikidza neRemote Play.
Kana ukarasikirwa nazvo, iyo PS5's yakajairwa edition inodhura $ 499.99, € 499.99, £ 449.99, kana 49,980 yen nepo iyo Dhijitari Edition iri mutengo pa $ 399.99, € 399.99, £ 359.99, kana yen 39,980.
Zuva rekuburitsa rekutanga rePS5 richava muna Mbudzi 12 muUnited States, Japan, Canada, Mexico, Australia, New Zealand, neSouth Korea.
Wese mumwe munhu anofanirwa kumirira zvishoma zvishoma: iyo console ichavhura muEurope uye mune dzimwe nyika dzese munaNovember 19.
Sezvineiwo, Sony nguva pfupi yadarika yakazvizivisa izvo Zvirongwa zvekutakura zvinopfuura mamirioni 7.6 mayuniti pakupera kwaKurume 2021, ichirova kutanga kwePS4.
The post PS5 "Yekupedzisira FAQ" Inopindura Yako Mibvunzo NezveSony's New Console yakatanga kutanga Twinfinite.